Rabshado iyo isu soo bax ayaa ka hordhacay doorashada madaxweynaha iyo sharci dejiyeyaasha ee Burundi, in kasta oo lagu guda jiro COVID-19 - Amjambo Africa
Xisbiyada siyaasadeed ee iska soo horjeedaa ayaa ka hor imanaya doorashada madaxweynaha iyo tan sharci dejinta oo lagu wado inay ka dhacdo 20ka May dalka Burundi, sida laga soo xigtay Shabakadda Telefishanka Shiinaha ee Global. Warbixinta Aljazeera ayaa sheegeysa in dagaalka ay kujirto weerar bam gacmeed oo 11-kii bishii May lagu dilay laba qof meel kutaal caasimada Bujumbura ee dalka.
Xisbiyada siyaasadeed ee tartamaya waxaa ka mid ah xisbiga awoodda badan ee madaxweynaha talada haya Conseil National Pour la Défense de la Démocratie – Forces zuba la Défense de la Démocratie (CNDD – FDD), iyo Golaha Qaranka ee Xorriyadda (CNL), xisbiga ugu weyn mucaaradka ee uu hoggaamiyo Agathon Rwasa , hogaamiye fallaago hore. Kulammo ballaaran iyo dibadbaxyo ayaa la qabanayaa inkastoo xiisadda COVID-19 ay jirto. Human Rights Watch waxay ku eedeysay xisbiga talada haya inuu cabsi ku abuuray bulshada dhexdeeda inta lagu gudajiray doorashada wuxuuna soo tebinayaa dilalka ka baxsan sharciga, luminta, rabshadaha ku saleysan jinsi, jirdil, iyo xarig aan sharciga waafaqsaneyn.
Wadanka bariga afrika waxa uu u socdaa codbixin kadib sanado daganaan iyo amni xumo kadib talaabo uu qaaday madaxweynaha haatan Pierre Nkurunziza si uu wax uga qabto mar seddexaad oo isku xigta kadib markii uu ka badbaaday inqilaab milateri oo uu horay u wada qabtay Jeneral Niyombare. Tan iyo isku daygii afgambi, Nkurunziza waddanka ugama uusan tagin awood rasmi ah. Mar haddii bulsho furan, oo fikradaha siyaasadeed ee baahinta had iyo jeer si guud loogu dhawaaqi karo, is-qabqabsiga hadda ka jira xisbiga talada haya wuxuu u muuqdaa inuu ku jeedsan yahay xakameynta khilaafka iyo xoojinta awoodda.
Kadib afgambigii fashilmay ee 2015, Burundi waxay si cad ugu eedaysay deriskeeda waqooyiga ee Rwanda inay ku lug leedahay isku daygii afgambi Nkurunziza. Ruwanda ayaa si adag u beenisay eedeymaha, iyada oo taa badalkeedana ay ku eedeysay Burcadda inay hayaan koox falaag ah, Force Démocratique zuba la Libération du Rwanda (FDLR), oo cadaawad u ah Rwanda.
Khilaafka ayaa sii socda, iyada oo ciidammo millatari oo ka socda labada dal ay isweydaarsanayaan dab aan caadi ahayn. Bishii Meey 8, askartu waxay isku khilaafeen xadka sharci darrada ah ee ka gudbaya harada Lake Rweru, sida ay sheegtay Wasaaradda Difaaca Rwanda.
Burundu waxay cayrisaa mas’uuliyiinta Qaramada Midoobay iyo Hay’ada Xuquuqul Insaanka waqti ka waqti, waxayna hada mamnuuceen warbaahinta caalamiga ah, sida Voice of America, iyo BBC, iyagoo ku eedeeyay inay faragalin ku hayaan siyaasada gudaha. Bishii Maajo 12-keedii, Burundi waxay dalka ka eriday madaxii hay’adda Caafimaadka Adduunka iyo shaqaalaheeda iyada oo aan la sheegin sabab la sheegay, sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday France24.
Tifaftiraha wararka ee Africa Jean Damascene Hakuzimana ayaa ka hadlay doorashadii madaxweynenimada iyo sharci dejinta 2010 ee ka dhacdey dalka Burundi.
PreviousVideo – featuring Hassan Alasow of Catholic Charities Maine
NextHeerka infakshanka ee dadka midabka leh ee Maine kor ayuu u kacayaa